Haa haa, si sax ah ayaad u akhriday! Kahor intaadan noqon wakiilka iibka hufnaanta tamarta, Anissa waxay ahayd kaaliyaha ilkaha ee cilmu-gelinta iyo qalliinka. Caddaynta in dhammaan dib-u-tababarku ay suurtogal tahay marka aad haysato xarunta tababarka saxda ah… iyo ilig adag!
Qof kasta oo ku eedeeya Anissa in aysan lahayn karti -u -lahaansho ayaa hoos ka akhriday sawirkeeda oo carrabkeeda toddoba jeer ku rogtay afkeeda marka xigta! Sababtoo ah waxa ugu yar ee aan dhihi karno ayaa ah in haweeneydaan yari aysan heysan ilo. Iyada oo gacanta ku haysa BAC STG (cilmiga maamulka iyo maareynta iyo teknoolojiyadda), DEUG LEA (Luqadaha Shisheeye ee la adeegsado) iyo waaya -aragnimada xirfadeed ee kala duwan sida soo -dhoweeyaha ama la -taliyaha iibka iyo xitaa kaaliyaha ilkaha, Anissa waxay caddayn kartaa inay dhammaan dhulku yahay. Runtii waxay dooratay inay "sahamiso" si ay u ogaato shaqadeeda ku habboon, taas oo ay aakhirka ka heli doonto kala bar adduunka ganacsiga iyo xoghaynta maamulka. "Markii aan xoogaa tijaabiyey, ugu dambayntii waxaan gartay in doorashada ugu fiican aysan ahayn in la doorto", way dhoola cadeyneysaa. Nasiib wanaag, shaqada Kaaliyaha Iibka ayaa kuu oggolaaneysa inaad isku darto ergooyinka. Markii ay jirtay 27 sano, waxay dooratay inay halkaas ku tababarto
Noqoshada Kaaliye Iibinta: Anissa isbadal xirfadeed oo dhiirigelin leh. Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Hal-abuurka maalgelinta
horeIskaashiga iyo wadajirka: amniga internetka waxaa lagu dhisay heer Midowga Yurub
socdaBeddel shaqada iyo nolosha adigoo uga mahadcelinaya tababbarka Kaaliyaha Sharciga: Aurélie ayaa markhaati u ah.